Nezvedu - Duoduo International Development Co, Ltd.
Duoduo International Development Co, Ltd yakavambwa muna 2013. Isu tine hunyanzvi mukugadzira uye nekuparadzira kwakasiyana-siyana makadhi emotokari, matiraki, ngoro dzekutengesa, flat-panji makatuni, akawanda-chinangwa egadheni magadheni uye zvimwe zvinoteedzera, zvinopfuura zana mhando dzezvigadzirwa. Iyo kambani inogadzira zvigadzirwa zvitsva kugutsa zvinodiwa pamusika gore rega.
Tine stamping mutsara, mutsara wekuwombera, mutsara wekukotama, jekiseni yekuumba jira, mutsara wekurapa mutsara, mutsara wekereke, mutsara wekuyera uye mhete dzimwe nyanzvi dzekugadzira izvozvi.
Isu takunda kuvimba uye kufarirwa kubva kune vatengi vazhinji nekuda kwekuvimbika kwakanaka, basa reunyanzvi uye yepamusoro yepamusoro yekutonga. Yedu yebasa chinangwa ndeche: yakakwirira mwero dhizaini uye kugadzira, yakanaka chitarisiko, yakagadzika mhando uye yakasimba. Iye zvino, muLiwu International Trade City, guta guru renyika, tine zvitoro zvedu zvakananga uye takapihwa zita rekuti "mutsigiri wekutengesa" nemusika. Isu tine yakazvimirira yeR & D simba uye yakanakisa sevhisi, gamuchirwa shamwari dzinobva kumativi ese enyika kutaurirana bhizinesi.
Isu tinodada nemhando uye kuenderana kweyakagadzirwa uye basa rakapihwa kune vatengi vedu uye isu tiri pano kuzoita yako yekutengesa online online ruzivo chaizvo. Pachitoro chedu chepamhepo, pane danho rakanaka. Nemakore mazhinji ehukama muhukama hwakananga nemugadziri wemugadziri uye vatengi vedu, isu tinogara tichiratidzira basa redu kuti unzwe zviri nani kana uchinge watenga pano.
Yese mirairo inobatwa nechero hanya yekusangana nezvinodiwa. Isu tinotenda kukosha kwekutenga kwako, ndosaka isu tichingotengesa zvigadzirwa zvitsva, zvisina kusarudzika, zvisina kushandiswa izvo zvinotiraira zvakananga kubva kumugadziri. Vatengi vedu vanotarisira, uye vanogara vagamuchira, yepamusoro mhando chigadzirwa kana kuraira pamwe nesu. Chinangwa chedu ndechekupa vatengi vedu zvigadzirwa zvakanaka pamutengo wakakodzera, zvinunurwa munguva.
Tine timu ine simba revatengi inochengeta ziso pane rese rekutengesa maitiro. Chikwata chinogara chakagadzirira uye chinofara kukubatsira, kugadzirisa kudzoka kwako nekutsiva, uye kuteerera zvichemo zvako. Boka redu rebasa rinonamatira kunhungamiro yayo.